GMM soo dhaweeyay howlaha guddiga xaqiiqo raadinta | KEYDMEDIA ONLINE
GMM soo dhaweeyay howlaha guddiga xaqiiqo raadinta
Waraaq ka soo baxday Golaha Midowga Mushariixna, ayaa lagu sheegay in Goluhu uu soo dhaweynayo kala shaandheyntii lagu sameeyay guddiga doorashada dadban ee muranku ka taagnaa.
MUQDIHO, Soomaaliya - War ka soo baxay Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa lagu soo dhoweeyay shaqada hordhaca ah oo ay qabteen Guddiga xaqiiqo raadinta ah ee uu magacaabay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, si ay u kala shaandheeyaan guddiga doorashada dadban ee muranku ka taagnaa.
“Goluhu wuxuu si daxadar leh u soo dhaweynayaa shaqada hordhaca ah ee ay qabteen guddiga xaqiiqo raadinta ah ee uu magacaabay Ra’iisul Wasaaraha, loona xil saaray kala shaandheynta xubnaha dacwada laga keenay ee guddiyada doorashada heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed si looga saaro guddiyada shaqaalaha rayidka ee Dowladda, saraakiisha ciidanka iyo xubnaha kale ee Khilaafka uu ka taagnaa”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay GMM.
Waraaqda waxaa lagu xusay in si shaqada guddiga xaqiiq raadinta ay u noqoto mid keenta xal mira-dhal ah oo dhaqan gala, loo baahan yahay in guddiga si daah furan oo madax bannaan u soo bandhigo habraaca iyo hannaanka loo maray kala shaandheynta xubnaha guddiyada doorashada ee heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed.
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa sidoo kale dalbaday in xubnaha cusub ee la magacaabi doono loo maro habraac iyo hannaan daah furan oo ku saleysan habraacyadii iyo heshiisyada doorashooyinka.
Waraaqda ku so baxday magaca GMM, ma cadda in loo dhan yahay, waxaana maalmahaan taagnaa hadal heyn la xariirta qaabkii ay Xukuumaddu u kala shaandheysay guddigii uu muranku ka jiray.